Waxaan jabiyay WordPress 2.1 | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 25, 2007 Douglas Karr
Waayahay, qofwalba wuu iska daayaa dhuuqista…. Waan ogahay inay tani tahay mawduuca asalka ah. Intii aan isku dayi lahaa 'hagaajinta' mawduucaygii hore iyo dhammaan koodhadh dhaqameedkii aan halkaas ku dhigay, waxaan go'aansaday inaan gebi ahaanba tirtiro. Marka aniga uun is dulqaad inta aan dhisayo mawduucayga koowaad ee WordPress. Waxaan u hayaa mawduucan foosha xun si aan naftayda ugu dhiirrigeliyo inaan mawduuca u dhammaystiro uguna dhakhso badan yahay. Waxaan bilaabay xalay!
Jan 25, 2007 saacadu markay ahayd 3:42 PM
Nasiib wanaagsan. Wax walba sifiican ayey iigu socdeen, laakiin waxaan sugayay shilka. Marwalba waan ka shakisanahay in wax si khaldan u khaldamayo markaan cusbooneysiiyo WordPress, laakiin illaa iyo hadda waligeed ma yeelan.
Jan 25, 2007 saacadu markay ahayd 4:20 PM
Way dhacdaa [ama] Waan ogahay waxaas oo kale. Nasiib wacan oo ku raaxeyso fursaddan si aad dib ugu cusbooneysiiso muuqaalkaaga iyo dareenkaaga.
Jan 25, 2007 saacadu markay ahayd 5:05 PM
Cinwaanka boostada weyn links Xidhiidhada sawirka waxay ahaayeen xoogaa buggy ka dib markii aan cusbooneysiiyay WordPress, laakiin haddii kale way quruxsan tahay.
Waxaan ku kalsoonahay mawduucaaga cusub inuu u muuqan doono mid jilicsan!
Jan 25, 2007 saacadu markay ahayd 5:10 PM
Nasiib wacan Doug. Waxaan dib u dhigay u cusbooneysiinta WordPress 2.1 maxaa yeelay waxaan ka walwalsanahay inaan ku dhaco isla masiirka.
Waxaan sameeyay dhowr mawduuc oo WordPress ah waqtiyadii lasoo dhaafay, markaa xoriyad inaad i siisid qaylo haddii aad ubaahantahay wax caawimaad ah.
Jan 25, 2007 saacadu markay ahayd 6:00 PM
Waxaan u maleynayaa in mawduucaaga "default" uu u muuqdo mid aad u fiican! Uma muuqato wax xun sida aad qiyaaseyso. Oo waxaan u maleynayaa inaad hadda uun caddeysay in xitaa "asalka" mawduuca u muuqan karo si fiican uun xoogaa wax ka beddelid ah.
Laakiin, yeelashada mawduuc la habeeyay oo abuuraya aqoonsi - taasi waa waxa loo yaqaan 'blogging' oo ku saabsan dhammaanteenna waxaan u baahanahay inaan yeelano baloog u muuqda mid gaar ah oo aan runtii adduunka ku soo bandhigi karno!
Waxaan rajeynayaa inaan arko mawduucaaga cusub.
Jan 25, 2007 saacadu markay ahayd 6:02 PM
Waxaan u maleynayaa inaad ula jeedo tubaako, waxaan joojiyay 30 sano ka hor inaan u aqbalo sigaar maskaxeed, laakiin ma neefsado
Jan 25, 2007 saacadu markay ahayd 6:03 PM
Wow - taageero cabsi leh. Mahadsanid qof walba! Runtii waan jeclahay fududaanta mawduucan. Waxaan doonayaa inaan arko haddii aan ku dari karo qaar ka mid ah fududaanta mawduucayga - kii iigu dambeeyay wuxuu ahaa xoogaa mashquul ah!
Cajiib! Kani waa hal kudhig WordPress qurux badan oo aad waddo !!! Maxaa lagu magacaabaa? 🙂
Oh snickering not smokings, sidoo kale waan joojiyay baararka snickers sidoo kale
Jan 25, 2007 saacadu markay ahayd 7:14 PM
Si buuxda ayaan u fahmay. Anigu boggeyga cusub waxaan diyaar u ahaa inaan tago illaa aan jabiyo mawduucayga sidoo kale. Waxoogaa yareyn ah ayaa wax ka sii daray. Waxay ahayd inaan dib u dhiso. Dhamaan intii boggeygii hore - qoris la'aanta - degelku wuu yaraa. Asal ahaan, waxaan ahaa ku dhowaad hal bil oo aan lahayn degel. Aniguna waxaan ahay horumariyaha ganacsiga websaydhka.
Jan 25, 2007 saacadu markay ahayd 7:20 PM
War ninyahow! Kaliya waxaa feeray John Chow! Caloolow !!!
Waxaan u arkaa tan ka nadiif badan tii hore. Waxaan rajeynayaa inaad wax karineysid wax nadiif ah oo xarrago leh.